भिडियोमा हेर्नुहोस् विश्वकै लामो जिब्रो भएकी यी महिलाको जिब्रो ! | suryakhabar.com
Home विचित्र संसार भिडियोमा हेर्नुहोस् विश्वकै लामो जिब्रो भएकी यी महिलाको जिब्रो !
भिडियोमा हेर्नुहोस् विश्वकै लामो जिब्रो भएकी यी महिलाको जिब्रो !
on: ७ जेष्ठ २०७५, सोमबार १७:१२ In: विचित्र संसारTags: No Comments
काठमाडौं । भनिन्छ युवतीहरुलाई बुझ्न निकै गाह्रो छ । उनीहरुको सकेंत बुझ्न पनि कला चाहिन्छ । त्यस्तै युवतीहरूको सेक्स अपिल बुझ्न निकै गाह्रो छ । तर युवतीको सेक्स अपिल बुझ्नुभयो धेरै फाइदा पुग्छ किनभने जुन केटी आफूलाई अति राम्री सम्झिन्छे, त्यसलाई एक नजर लगाइदियो भने उसको घमण्ड बढ्छ । त्यस्ती युवतीलाई छड्के आँखा पारेर खुट्टामा हेरिदियो भने ऊ स्वतः लज्जित हुन्छे ।
खुट्टामा हेरेर प्याच्च थुकिदिनुभयो भने केही पर पुगेर आफ्नो जिउडाल फर्की–फर्की हेर्न थाल्छे। र, नजिकमा घर वा कोठा भए फर्केर गई ऐना हेर्छे। यो पुरुषहरूको सम्मोहन शक्तिको गुण हो। यहीलाई फलो गरियो भने केटीहरू पट्निेमा द्धिविधा छैन।किनभने जतिसुकै व्यस्त आईमाई भए पनि घरबाट बाहिर निस्कँदा घडी अर्थात् समयलाई महत्व दिँदैनन्, ऐना हेर्छन्। ऐना नहुनेले मुख पुछपाछ गरी कम्मर मर्काइमर्काई आफ्नो शरीर हेर्न थाल्छन् ।
त्यस्तै लोग्नेमान्छेको आँखाबाट आफू मोहित भएको कुनै पनि युवतीलाई थाहा हुँदैन । यदि कुनै युवती र तपाईं दुईजनामात्रै एउटा बन्द कोठामा हुनुहुन्छ । युवती एउटा खुट्टा अर्कोमा चढाएर वा उपरखुट्टी लगाएर बसेकी छे भने तपाईंले यौन प्रस्ताव राख्नुहुँदैन । राख्नुभयो भने तपाईंको गालामा थप्पड वा चप्पल पर्ने बताइएको छ। तर खुट्टा फारेर बसेकी छे । देब्रे या दाहिनेमध्ये कुनै एक हल्लाउँछे भने समागमको प्रस्ताव राख्नुभयो भने फरक नपर्ने अध्ययनकर्ताहरूको दाबी छ । -एजेन्सी
कर्मचारीको उमेर हदबन्दी ५८ वर्ष कायमै
सरकारको ५ बर्षे लक्ष्यः प्रतिव्यक्ति आय दोब्बर
७ जेष्ठ २०७५, सोमबार १७:१२